Global Voices teny Malagasy » Mankalaza Ny Famotsorana Ilay Gadra Politika López Rivera i Pôrtô Rikô · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Febroary 2017 5:19 GMT 1	 · Mpanoratra Ana Gabriela Calderón Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Karaiba, Pôrtô Rikô (Etazonia), Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Sary avy amin'i Kike Estrada. Nahazoana alalana.
Ny andron'ny 17 Janoary nanovan'ny filoha teo aloha Barack Obama  [mg] ny sazin'i Oscar López Rivera, gadra politikan'i Pôrtô Rikô ela indrindra, ihany dia nanomboka ny fankalazana manetriketrika.
Voampanga ho nanao teti-dratsy hikomy i López Rivera tamin'ny taona 1981 ary nahazo sazy 55 taona an-tranomaizina tao amin'ny fonja federaly. Nigadra 35 taona izy, ary tamin'ny toerana manokana ny 12 taona tamin'izany
Nanamafy i José López Rivera , rahalahin'i Oscar monina ao Chicago, fa andro manokana io andro io ho an'i Pôrtô Rikô, izay sisintany Amerikana ity. Naneho ny fahagagany tamin'ny fanohanana rehetra voarain'ny rahalahiny avy amin'ny sehatra samihafa manerana izao tontolo izao izy. Nahasarika ireo mpanao politika, mpikatroka sy mpanakanto manana firehana sy tontolo ara-politika samihafa ny hetsika fitakiana ny famotsorana an'i López Rivera, tao ohatra ireo mpanohana ny fahaleovantena, tahaka ilay mpikambana amin'ny Kongresy Amerikana Luis Gutierrez , sy ny mpanohana ny fanjakana tahaka ny governoran'i Pôrtô Rikô Ricardo Rosselló .
Anisan'ireo vondrona maromaro nandrakitra ny fankalazana  notontosaina tao an-dalamben'i San Juan miaraka amin'ny mozika nentin-drazana Pôrtô Rikàna ny Campamento contra la Junta , fikambanana mpikatroka eny ifotony izay nametraka tranolay tao ivelan'ny Lapam-pitsarana Federaly ao an-tanànan-drenivohitr'i San Juan ho toy ny mariky ny tsy fankatoavan'ny sivily ny Birao Fanarahamaso ny Hetra izay napetraky ny Amerikana vao haingana tao Pôrtô Rikô.
Olona manao fankalazana ao amin'ny Placita de Santurce ao San Juan ny alin'ny fanambarana navoakan'ny gazety. Sary avy amin'i Rafael A. Ortiz Mendoza. Nahazoana alalana.
Niseho roa andro monja talohan'ny Fetibe An-dalambe San Sebastiana fanao isan-taona ny famotsorana an'i López Rivera, ary nanambara haingana i Carmen Yulín , lehiben'i San Juan fa hiomana amin'ny hetsika manokana amin'ny fahatongavany amin'ny volana Mey ny tanàna. Nanome antoka ihany koa ny lehiben'i San Juan fa omena toerana ao amin'ny kaominina i López Rivera  amin'ny maha mpikarakara ara-piarahamonina azy, ary maneho ny andron'ny rariny sy ny fahamendrehana ho an'ny vahoakan'i Pôrtô Rikô ny famotsorana azy.
Ao Etazonia, na dia izany aza, tsy voatery ho tsara avokoa ny fanehoan-kevitra rehetra momba ny fanovàna ny saziny. Amerikana Kaonservativa mpaneho hevitra ara-politika iray antsoina hoe Glenn Beck ohatra naneho ny tsy fankasitrahany,  ary fampahalalam-baovao maromaro no nanondro an'i López Rivera ho “mpampihorohoro.” 
Voampanga ho nanao ny teti-dratsy hikomy i López Rivera noho ny fifandraisany tamin'ny Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN-Tafika ho Fanafaham-pirenena), izay vondrona nanatontosa daroka baomba maromaro tao Etazonia tamin'ny taompolo 1970 sy tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1980 ho fitakiana ny fahaleovantenan'i Pôrtô Rikô eo am-pelantanan'i Etazonia. Nanizingizina i López Rivera fa tsy mba nandray anjara velively tamina herisetra, ary tsy mbola voampanga mivantana tamina tetidratsy daroka baomba mihitsy izy.
Tsy mba niala an-daharana tamin'ny fanohanany ny fahaleovantenan'i Pôrtô Rikô mihitsy izy.
Namaly ireo mpitsikera ny rainy  i Clarissa López Rivera, zanakavavin'i Oscar, nilaza fa “Tsy mbola nandatsa-drà ny raiko”, nampiany koa ny nahazo loka Medaily Alimo izy noho ny asa fanompoany tao amin'ny Tafika Amerikana nandritra ny Ady tany Vietnam ary iray amin'ireo mpikarakara ara-piarahamonina mendrika indrindra tao Chicago izy.
Jorge Nieves Rivera, mpahay tantara, kosa namoaka lahatsoratra fohy  tao amin'ny gazetiboky nomerika 80grados momba ireo gadra politika voalohany tao Pôrtô Rikô nandritra ny fanjakazakana espaniola tamin'ny taonjato faha-19, manao fampitahana azy ireo (gadra politika) amin'i López Rivera. Tamin'ny Oktobra 1896, voasambotra ireo mpikambana mavitrika 27 tao amin'ny fiarahamonina miafina izay niketrika hanasaraka an'i Pôrtô Rikô amin'i Espaina. Nanome baiko hampiditra azy ireo am-ponja ny lehiben'i Cadiz tao Espaina, saingy herintaona taty aoriana, nahazo famelàna izy ireo. Nanoratra i Nieves Rivera:
Amin'ny maha mpampianatra tantara, tsy azo ihodivirana ho ahy ny mampitaha sy mampitovy ireo gadra politika Pôrtô Rikàna tamin'ny fiandohan'ny taonjato amin'i Oscar López Rivera. Marobe ireo zavatra mitovy teo amin'ireo tantara roa ireo, eo amin'ireo gadra politika [avy ao an-tanànan'i] Arroyo sy eo amin'i Oscar López. Amin'ireo raharaha roa ireo, hitantsika fa niatrika fiampangana mitovy ireo gadra avy ao Cadix sy i López Rivera, izay samy mpikambana amin'ny fiarahamonina miafina manana tanjona hisintaka, ary samy nalefa tany amin'ny fonja vahiny. Etsy ankilany kosa, samihafa ny sazy. Tsy nisy tamin'ireo gadra avy ao Arroyo no voasazy mihoatra ny 10 taona ary tsy niatrika fiampangana mifandraika amin'ny tetidratsy hikomy izy ireo, na fiampangana ho manafika tafika.
Nanaraka ny tantaran'i Oscar López Rivera  [mg] sy ny hetsika fitakiana ny famotsorana azy  [mg] nandritra ny taona maro hatrany ny Global Voices. Manaraha anay hatrany raha hijery ny antsipirihany bebe kokoa mikasika ny fiverenany mialoha ao Pôrtô Rikô amin'ny volana Mey.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/05/94932/
 nanovan'ny filoha teo aloha Barack Obama: https://mg.globalvoices.org/2017/01/19/94558/
 nandrakitra ny fankalazana: https://www.facebook.com/CampamentoContraLaJunta/videos/1230978683656826/
 nanambara haingana i Carmen Yulín: http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/sanjuanpreparalosarreglospararecibiraoscarlopezrivera-2281940/
 omena toerana ao amin'ny kaominina i López Rivera : http://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/oscarlopezriveratendratrabajoseguroensanjuan-1200764/
 Glenn Beck ohatra naneho ny tsy fankasitrahany,: http://www.glennbeck.com/2017/01/18/the-dangerous-marxist-terrorist-obama-released-from-prison/
 nanondro an'i López Rivera ho “mpampihorohoro.”: http://www.politico.com/magazine/story/2017/01/oscar-lopez-commutation-barack-obama-214685
 Namaly ireo mpitsikera ny rainy: https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/01/18/hija-oscar-lopez-papa-no-sangre-manos.html
 lahatsoratra fohy: http://www.80grados.net/el-caso-de-oscar-lopez-rivera-y-los-prisioneros-politicos-de-1895-96/
 tantaran'i Oscar López Rivera: https://mg.globalvoices.org/2013/12/10/55520/
 hetsika fitakiana ny famotsorana azy: https://mg.globalvoices.org/2016/11/23/92437/